Ọgwụgwụ endometritis, postometritis mgbe nnyefe - mgbaàmà, ọgwụgwọ, ọgwụ ọjọọ, ọgwụ nje na endometrium
Nne Ịmụ nwa
Ọgwụgwụ endometritis - nke na-akpata ọrịa na otu esi edo ya?
Ọgwụgwụ endometritis na-ezo aka na ọrịa ndị gynecological bụ ndị na-esi na mụọ nwa. Na ya, mbufụt na-emetụta akpụkpọ anụ mucous nke akpanwa, nke nwekwara ike ịgafe oyi akwa ahụ. Ka anyị tụlee ihe ahụ mebiri na nkọwa ndị ọzọ, ka anyị kpọọ aha ya, ihe ịrịba ama na usoro ọgwụgwọ.
Ọgwụgwụ endometritis - akpata
A na-emechi ọrịa na-akpata mgbe ọ na-amụ nwa na mpaghara ebe a na-ahụ placenta. Na oge nkewa nke afterburn, a na-emebi arịa ọbara. E guzobere ọnyá ọnyá, bụ nke nwere ike ịme ihe nke microorganisms pathogenic. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka oria. A na-emepe mmepe nke ihe gbasara ọrịa site na ihe na-akpali akpali, nke gụnyere:
imebi mmegide nke mpaghara (ụbụrụ nke na-adịghị ala ala ma na-efe efe na usoro ọmụmụ);
na-emeghị iwu nke ịdị ọcha na-adị ọcha na oge ezumike.
Ọtụtụ mgbe, ihe ndị dị mkpa maka mmepe nke endometritis bụ nke a na-egbu oge bụ ịkwụsị usoro mgbagha (mgbake) nke akpanwa, oge nke lop-hews. N'okwu a, microorganisms opportunistic na-arụ ọrụ dị ka ihe na-akpata ọrịa, bụ nke na-akpata ọgba aghara, nke dị na obere ego na urogenital system. N'etiti ha:
Endometritis mgbe ngalaba caesarean gasịrị
Ịzụlite endometritis mgbe ha laghasịchara na-abụkarị n'ihi ịwa ahụ mberede. Ya mere, ya na ihe a na-eme atụmatụ, ugboro ole endometritis anaghị eru pasent 5, ma ọ bụrụ na ihe mberede ahụ na-eme, 22-80%. Ọgwụgwụ endometritis, nke sitere na caesarean, na-emekarị n'ụdị dị njọ. Nke a bụ n'ihi ọrịa nke mbepụ ahụ n'ime akpanwa na mgbasa ngwa ngwa nke mbufụt karịrị membrane mucous. N'ihi ya, ọrịa ndị ọzọ na-eto eto:
myometrium - emebi emebi nke muscular oyi;
N'ihi usoro mkpasu iwe, enwere mmebi nke usoro nchịkwaghachi n'ime mgbidi nke awara. Enwere ike ime nke a site n'iji ihe eji eme ihe. Okpokọta ọrụ nke akpanwa, n'ihi nke a na-esi na lochia siri ike ma na-eme ka ọnọdụ ahụ dịkwuo njọ. Ọrịa ahụ na-eme na 4-5th ụbọchị ma na-esonyere:
ahụ okpomọkụ 38-39 degrees;
mmụba nke ọnụọgụ obi - tachycardia.
Ọgwụgwụ mgbe ị na-ete ime
Enwere ike ịmalite ime na endometritis site na ite ime n'oge gara aga. Ihe omume nke na-emetụta oghere uterine na-eme ka ọrịa a na-emepe emepe. Nke a bụ n'ihi oké ọnyá nke njedebe endometrial. N'ihi ya, dum mucosa na-aghọ ọnya ọnya nke nwere ike ịme ihe nke microorganisms pathogenic. Ịghara ịdị ọcha na nlekọta ahụike na-eduga na mmepe nke endometritis.
Endometritis mgbe amuchara nwa - mgbaàmà
Iji chọpụta ọgwụgwụ endometritis na oge, nne ọ bụla kwesịrị ịma mgbaàmà nke ọrịa a. Dabere na foto ahụike, ụdị nsogbu atọ dị oke, nke ọ bụla nwere àgwà nke aka ya:
Ụdị ọkụ. Ọ na - amalite maka ụbọchị 5-12. N'otu oge ahụ, megide ọdịdị nke ọdịmma ahụ dum, ahụ ọkụ dị elu na-arị elu ruo 38-39 degrees. Ọnọdụ ahụ ike anaghị ata ahụhụ. Ndị ọrịa na-akọ ọnyá n'ime akpanwa, nke na-adịru ụbọchị 3-7. Mgbe ịkọ ụda, ndị dọkịta na-ahụ ntakịrị mmụba na nke akpanwa. Lochias bụ ọbara na ọdịdị, ọbụna otu izu mgbe mmalite.
Ụdị egwu. A malitere ọrịa ahụ na 2-4 ụbọchị mgbe amuchara nwa ahụ. Na pasent 25 nke ikpe, a na-emepụta endometritis n'azụ chorioamnionitis mgbe a gbasasịrị mgbagwoju anya, enyemaka nke ogwugwu. Na ogologo oge, nyocha dị omimi, enweghi mmezi kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na ụbọchị ole na ole, a ghaghị ịkọwa nsogbu ndị na-adịghị mma. Ụmụ nwanyị na-eche banyere:
ihe mgbu n'ime afọ ala;
ọnọdụ okpomọkụ dị ogo 39.
Ụdị Shabby. Amalite na 3-4 ụbọchị. Okpomọkụ nke ahụ adịghị elu ogo 38. N'ọtụtụ ndị ọrịa, lochia bụ aja aja mbụ, ma na-aga saccharum. Ọkpụkpụ nke akpanwa na-anọgide na-enwe maka 3-5 ụbọchị. Na nzụlite nke ọgwụgwọ, ọnọdụ okpomọkụ na-edozi mgbe ụbọchị 5-10 gachara.
Mmegharị na njedebe
Na-akpọ ihe ndị bụ isi nke njedebe nke endometritis, a ghaghị ikwu na a ga-ehichapụ ya na ụdị ọkụ dị iche iche na-enweghi ike ịhụ nwanyị ahụ n'onwe ya. Otú ọ dị, a na-egosiputa ọgwụgwụ endometritis mgbe ọ na-agbanwe agbanwe ahụ. Mgbe a mụsịrị nwa ahụ, a kpochapụrụ oghere uterine, nne na-edozi lochia . Dika ha nwere uhie uhie, ha adighi edozi, n'enweghi mgbochi na odighi nma. Site na mmepe nke usoro mkpali ahụ, onyinyo ahụ gbanwere kpamkpam.
Mgbe ụbụrụ na-amalite n'oge ọgwụgwụ, lochia na-enweta mgbe ọ na-agba aja aja. Mgbe a na-enyocha ha, enweghi ike ịchọpụta ihe na-adịghị mma. Ghọta ihe mgbochi ọbara, bụ nke a kpụrụ n'ihi nzere dị mgbagwoju anya. Nke nta nke nta, nkwụsị ahụ malitere ịmalite ísì ụtọ. Ọnọdụ ahụ chọrọ enyemaka ahụike. Mgbe ị na-enyocha nwanyị na oche ụlọ gynecology, dọkịta na-achọpụta na ọ na-akwụsịlata mgbake nke akpanwa.
Nchoputa nke endometritis nke ocha
Iji chọpụta nnukwu ọgwụgwụ postometritis, ọ dị mkpa ka a nyochaa onye ọkà mmụta sayensị nwere ahụike naanị na enyo. N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbanwe na-emetụta cervix. Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ịchọrọ na mmebi iwu na-eleba anya na akụkụ ahụ nke anụ ahụ site na mgbidi abdominal. Nchoputa nke "endometritis nke ocha" bu ihe dabere na nchoputa ule nyocha:
usoro nje bacteria nke na-esi na akpanwa pụta (na-edozi ụdị ọrịa ahụ);
Ultrasound nke obere pelvis;
Endometritis - nsogbu
Na enweghị ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị, na-ekwenyeghị na akwụkwọ ọgwụ, enwere nsogbu nke nsogbu. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, usoro mkpali na-aghọ nke zuru ebe nile ma na-agafe n'akụkụ ndị agbata obi. N'okwu a, ndị dọkịta na-edekọ nsogbu ndị na-esonụ nke ọgwụgwụ endometritis:
pelvioperitonitis - mbufụt nke akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke pelvic cavern;
peritonitis - mbufụt nke peritoneum;
thrombophlebitis - usoro mkpali nke na - emetụta arịa ọbara n'ime obere pelvis;
pelvic abanye - purulent anya, nwere ya mgbidi;
Ọgwụgwụ endometritis - ọgwụgwọ
Ọgwụgwọ nke endometritis nke oge ọmụmụ malitere site na nhazi nke ụdị ọrịa na ihe kpatara ọrịa ahụ. Ndabere nke ọgwụgwọ bụ ọgwụ nje antibacterial na ọgwụ mgbochi. N'ihe yiri ya, dee ọgwụ iji mee ka nchebe ahụ ghara ịdị. Iji meziwanye lochia, jiri antispasmodics mee ihe. A na-ahọrọ usoro ahụ n'otu n'otu, na-echebara ogo nke mmebi na oke mgbaàmà ya.
Endometritis - ọgwụgwọ, ọgwụ ọjọọ
A na-eme ka ọgwụ nje maka endometrium na-eburu n'uche ihe na-enye nwa ara. A na-eji penicillins na cphalosporins sistem. N'ime ọgwụ dị otú a ọ dị mkpa itinye aka:
Mgbe mgbe, ha na-ahazi usoro ịchịkọta, tinyere nchịkọta nke usoro metronidazole na ọgwụ nje nke òtù lincomycin. A naghị eji nke a na-aṅụ ara, ebe ha na-abanye n'ime mmiri ara ehi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwanyị ahụ kwụsịrị maka ogologo oge ị na-aṅụ. Ọgwụgwọ na ọgwụ antibacterial na-akwụsị 24-48 awa mgbe mma ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe endometritis kpatara site na ọnụnọ nke anụ ahụ n'ime oghere utiri mgbe a kpụchara ya, a na-eme ọgwụgwọ. Ọ gụnyere:
ịsacha oghere uterine na ọgwụ antiseptics mma (furacilin, dioxin 1%).
A na-atụ aro iji belata absorption nke ngwaahịa decomposition na ogige ndị na-egbu egbu. Na mgbakwunye, usoro a budata belata ego nke purulent ihapu, mee ka usoro lochia dị mma. A na-eme nhazi mgbe 4-5 ụbọchị, na nnyefe mmiri na mgbe ụbọchị 6-7 gasịrị. Otu nwanyị n'oge a nọ n'ụlọ ọgwụ.
Physiotherapy na endometrium
Mgbe ọrịa ahụ bụ endometritis, usoro nke ọdịdị physiotherapeutic enyere aka belata usoro ahụ. N'etiti ndị nkịtị:
Usoro ọgwụgwọ nkwụsịtụ maka Nemuk - gụnyere iji mmiri nke ala dị ala ma ọ bụ nke na-arụ ọrụ site na 4 electrodes;
mmiri na - eme ka ọ dị ala - jiri oge emezi ihe;
acupuncture - nwere mmetụta dị mma na-enweghị atụ.
Nkọwapụ nke endometritis nke postkom
Iji wepu ọrịa ahụ, endometritis, mgbochi kwesịrị ịmalite n'oge ime atụmatụ nke afọ ime. A gwara ndị dọkịta ka ha kwadebe tupu oge a maka usoro a. Mgbochi nke endometritis gụnyere ịkwado ihe ndị dị ka:
nchọpụta na ọgwụgwọ ọrịa ndị na-adịghị ala ala nke usoro ọmụmụ mgbe ọ na-achọpụta;
ndebanye aha oge maka afọ ime;
gaa na dọkịta ahụ mgbe niile;
ezi nlekọta nke oru - na - ewere ihe na - egosi na a na - amụ nwa site na ọmụmụ nwa, na - enyocha abiara mgbe nile, na - enye ọgwụ nje mgbe ịwachara ọrịa ahụ iji gbochie ọrịa.
Ajọ mgbe amuchara nwa
Mgbe ụdị ihe na-adịghị mma
Mweghachi nke usoro ahụ mgbe amuchara nwa - ihe niile nke normalization nke ọrụ ịmụ nwa
Mmekọahụ mgbe a mụsịrị nwa - mgbe ị nwere ike?
Kedu otu esi eme ka agha?
Kedu ka esi ghọta na mmiri ahụfeela?
Ogologo lochia ole ka ọ na-anọ mgbe amuchara nwa?
Ihe ngosi mgbe a mụsịrị nwa
Mmekọahụ mgbe amuchara nwa
Ịmụ nwa na izu 36
Mkpụrụ siwe na eriri ụdọ
Urinary incontinence mgbe amu nwa
Emily Ratjakovski na vidiyo Krismas video LOVE Magazine
Kedu esi asa ihe ọcha?
Kedu ihe ị ga-eji na-egwuri egwu?
Yellow snot na okenye
Ị gbadala n'akụkọ ihe mere eme: iri abụọ na iri abụọ na atọ, nke mebiri n'afọ 2017!
Gel na-agbanye mgbatị na ụdị
Ihe kacha mma ejiji Halloween: Kim Kardashian pụtara na Selena Quintanilla
Uwe ejiji T-shirt na-eme afọ a
Gini mere ndi nwanyi ime ime na-ele anya onye nwuru anwu?
Ugbochi udiri udiri gburugburu n'olu 1 oge
A na-akpọ nwa atụrụ atụrụ na oven
Black radish si na-eto eto ụkwara
Oke Osisi Oshak
Panangin - egosi maka ojiji
Mmekọahụ gbasara mmekọahụ - mmetụta
Kedu ka esi eme protein?
Mmiri mmiri na ụlọ na aka aka ha
Kedu ka esi ejiye pencil gwuo anya gị?
Ejiji jaket 2015
Kedu otu esi kwụsị ịkwa ákwá?